उपकार लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट हुदै , यसरि हेर्नुहोस नतिजा।
उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ आज बाँडफाँट हुने भएको छ ।
निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङका अनुसार क्यापिटलको कार्यालय हात्तिसार काठमाडौंमा शुक्रबार बिहान ८ बजे आइपीओ बाँडफाँट गरिने भएको हो । उक्त आईपीओकाे प्रि-अलटमेन्ट वैशाख ६ गते, मंगलबार सम्पन्न भएकाे थियाे ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका अनुसार लघुवित्तको आईपीओमा अन्तिम दिन सम्म २४ लाख ३१ हजार १७० जनाले आवेदन दिएका छन्। कम्पनीको आईपीओमा २४ लाख ३१ हजार १७० जनाले २ अर्ब ७५ करोड ६५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ७५ लाख ६५ हजार २३० कित्ताको लागि आवेदन दिएका हुन् । जुन मागभन्दा १२४ दशमलव ६५ गुणा बढी आवेदन हो ।
यो आवेदनलाइ हेर्दा १०० जनामा १ जनालाई मात्र १० कित्ता पर्ने देखिन्छ। कम्पनीले चैत्र २५ गतेदेखि चैत्र ३० गतेसम्म २ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६६ हजार २५० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारीपूँजी रू. ६ करोड ५६ लाख २५ हजार ३६ प्रतिशतले हुन आउने रू. २ करोड ३६ लाख २५ हजार बराबरको शेयर निष्काशन गरेको हो ।
उक्त संस्थाको शेयर निष्कासन तथा बिक्रि प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैङ्किङ लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय बाँके जिल्लाको कोहलपुर- ११ मा रहेको छ ।